चाउ चाउ - Chow Chow
ओबामा की क्लिंटन ?
नियोजित- प्रायोजित दंगामा आक्रान्त काठमाडौं।
बेबी किंगको कुरा सुनिएको थियो तर बेबी प्रधानमन्त्र...
भोक लागेर केही खान निस्केको एक ठाउंमा चाउ चाउ बिक्रीमा पो लेखेको रहेछ। के चाउ चाउ रहेछ भनेर पढेको त के को खाना हुनु नि? अर्कै कुरा पो परेछ। देखीहाल्नु भो नि के परेछ भनेर।
हामी त खाने कुरालाइ चाउ चाउ भन्छौं ह्या त कुकुरको जात पो रहेछ। कसैले के खाइस खाजा भनेर सोध्यो भने चाउ चाउ....होइन होइन वाइ वाइ भन्नु पर्ला। मलाइ पनि अचम्म लागेर सोध खोज गरेको त चाउ चाउ (Chow Chow) को उत्पती चिनमा भएको रहेछ। यसलाइ चिनियामा sōngshī quǎn -鬆獅犬 भनिने रहेछ जस्को अर्थ भुत्ले शिंह हुदो रहेछ। चिनमा यो कुकुरको मोडल बुद्द मन्दिर वरिपरी रक्षकको रुपमा राख्ने गरिदोरहेछ। १८ औ शताब्दी ताका यसको मासु बेलायतमा बिक्री हुंदो रहेछ। यसरी मासु आउदा मासुको पोकामा "Chow Chow" लेखिएको रहेछ। यसको अर्थ चिनयामा खित्री मित्री भन्ने रहेछ तर भन्सारका कर्मचारीले नाम नै चाउ चाउ भन्ने बुझेछन । यसरी पश्चिमी देशमा यो कुकुरको नाम चाउ चाउ रहन गयो।हामीले नेपालमा खाने गरेको चाउ चाउको नाम चाही कसरी रहन गयो? यो नेपाली खाना त पक्कै होइन। कतै बाहिबाट "Chow Chow"खित्री मित्री भनेर आउदा हामीले चाउ चाउ भन्न थालेका त होइनौं।
- Ajaya Dhakal
अमेरिकी रास्ट्रपति को चुनाव को सरगर्मी चलेको बेला मैले केहि लेख्ने जमर्को गरेको छू। डेमोक्रेटिक पार्टी बाट उमेदवार बनेका दुई पत्रिस्पर्धि बराक ओबामा र हिलारी क्लिंटन बारेमा मेरो बिचार यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेको छू।
किन ओबामा ?
सीनेटर ओबामाको बोलिमा एक जादू छ।
जहाँ जहाँ उनी बोलेका छन उनले खूब राम्रो छवि छाडेका छन। मेरो बिचारमा ओबामामा एउटा गजबको influential capability छ, एक किसिमको ताजापन छ । सायद उनको उपस्थितिले होला , यस पटकको चुनाव प्रचारमा युवाहुरुको ठुलो उपस्थिति भएको छ। ओबामा को चुनावी मुद्दा भनेको इराक युद्द , स्वास्थ्य र उच्च शिक्षा वरिपरी घुमेको छ. उनको चुनावी नारा छ " Change, we can believe in".
किन क्लिंटन ?
न्यूयोर्क की सिनेटर हिलारी क्लिंटन मा आठ वर्ष सम्म अमेरिकाको प्रथम महिला भएको अनुभव पनी छ । यसको अलावा बिगत ३५ वर्ष देखी कानून ब्यवसाय मा काम गरेको अनुभव छ। क्लिंटन ले अमेरिका भित्र मात्र हैन अमेरिका बाहिर को संसार पनी देखेकी छिन ।उनको चुनावी मुद्दा पनी ओबामा को जस्तै जस्तै नै छ। उनको चुनावी नारा छ " Ready for Change" ।
मेरो रोजाईको को त ?
यिनीहरु दुई जना मा आ आफ्नो खूबी र क्षमता छ। दुई मध्ये कसैले रास्ट्रपति को चुनाव लड़ने मौका पाए र जीते भने इतिहास बनाउने छन। हुन त म जस्तो बिदेशी मान्छेलाई कागलाई बेल पक्यो हर्स न बिस्मात हनु पर्ने हो , तर पनी यो मन न हो. . ..नसा त अली अली चढी हाल्छ। मेरो सहानुभूति भने ओबामा भन्दा क्लिंटन प्रति धेरै छ। उनको अनुभव ले मात्र हैन , उनका पति बिल क्लिंटन को अनुभब ले पनी अमेरिकाको खास्किदो अर्थतंत्र लाई माथी उठाउने छ भन्ने मेरो बिस्वास छ। हेरौ यो राजनीति को खेल ले कस्लाई कहाँ पुर्याउँछ ?
दौतरी हरु को के बिचार छ ?
यहाँहरुको रोजाई को उमेदवार को हो , कमेंट मा लेख्नु होला। अहिले लाई जदौ !
अर्बाचिन काठमाडौंको दंगा फसादको इतिहास धेरै लामो छैन। २०१८ सालमा ब्यक्तिगत बिबादले भड्केको दंगाले एतिहासिक जन सेवा सिनेमा खरानी भएको थियो। भनिन्छ, त्यतिबेला आक्रोशित भीडले जन सेवा ( हाल बिशाल बजार रहेको स्थानको ठिक सामुन्नेको जुद्ध दमकललाई समेत आगो निभाउन दिएको थिएन रे।
त्यस घट्ना पछि कुनै उल्लेख्य दंगा फसाद भएको सुनेको थिएन २०३६ साल सम्म। २०३६ सालको घट्नालाई दंगा को उपमा दिन मिल्दैन होला नै। तै पनि जीवन को पहिलो दंगा देखेको भोगेको ले केही लेख्ने जमर्को गरेको छु। जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई तत्कालीन तानाशाह् जनरल जिया उल हकद्वारा दिइएको फाँसी को बिरोध गर्न निस्केको बिद्यार्थीहरुको जुलुस् माथि प्रहरी दमन को प्रतिक्रिया स्वरुप भएको घट्ना थियो। त्यो घट्नाका बिभिन्न उपघट्नाहरुको प्रत्यक्षदर्शी यो पंक्तिकार पनि थियो।
पहिलो दिन पाकिस्तानी दूताबासमा बिरोध पत्र बुझाउन गएका बिद्यार्थी संगठनहरुका समर्थकलाई प्रहरी प्रशासनले दमन गर्यो। त्यसको भोलि पल्ट त्यो दमनको बिरोध गर्न बसन्तपुरमा भेला भएका बिद्यार्थीहरु माथि चारै तर्फ घेरा हालेर निर्ममतापूर्बक लाठी प्रहार गरे। बसन्तपुर स्थित नव आदर्श बिद्यालयमा ७ कक्षामा पढ्थें र त्यो दमन त्रसित भएर कक्षा कोठाबाट हेरिरह्यौं। त्यस दिन देखि तत्कालीन ब्यबस्थाको बिरुद्द मेरो बाल मष्तिस्कमा बिद्रोह अंकुरायो।त्यस्को भोलि पल्ट हो कि पर्सि पल्ट, ने बि संघका तत्कालीन अध्यक्ष बल बहादुर केसी, अखिल का टंक कार्की लगायतलाई प्रायोजित रुपमा मण्डले घोषणा गरी कालो मोसो र जुत्ताको माला लगाई ठेला गाडामा राखेर शहर घुमाइयो। त्यही भीड अनियन्त्रित भै नया सडक गेट स्थित नेपाल बायु सेवा निगमको भवनमा ढुंगा मुढा भयो र आगो पनि झोसियो। त्यति बेला पहिलो पल्ट गोली चलेको आफ्नै आँखाले देखियो र पहिलो पल्ट कर्फ्युउ के हो भोगियो।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि प्रायोजित दंगाको सिलसिला सुरु भयो। बहुदल घोषणाको लगतै पछि हल्लाको भरमा असामाजिक तत्वहरुको अगुवाई १०-१२ दिन अनियन्त्रित रह्यो हाम्रो काठमाडौं। निर्दोष प्रहरीहरुलाई टेकु क्षेत्रमा कुटी कुटी मारे। हनुमान ढोका स्थित प्रहरी कार्यालय भीडले कब्जामा लिन प्रयास गरे। कार्यालय बचाउन प्रहरीले गोलि चलाउदा केही ब्यक्तिहरु को ज्यान् गयो, ती घट्नाहरुको नमीठो छाप अझै ताजा नै छ।
२०४८ साल को आम निर्बाचन पछि संस्थागत रुपमा दंगा फसाद गर्ने सिल्सिला सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याई सरकार गठन गरेको १ महिना नपुग्दै प्रमुख बिपक्ष दलले सरकार ढाल्ने उदघोष गरे। कर्मचारी र शिक्षकलाई आन्दोलनमा उतारे। बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम् गर्नै न दिने अराजनैतिक संस्कार बोकेका पार्टीका कथित क्रान्तिकारीहरुद्वारा सार्बजनिक सम्पति भत्काउने जलाउने असभ्य परम्पराको सुरुवात गरे।दुर्भाग्यबस नेकपा एमालेका शक्तिशाली महासचिब का मदन भण्डारी र नेता जीब राज आश्रितको दास ढुंगा काण्डमा निधन भए पछि काठमाडौले सबै भन्दा पीडादायक् दंगा भोग्यो। सार्बजनिक सम्पति मात्र तोड्फोड् गरेनन्, आम जनतालाई न भै नहुने दूर संचारको दुइ तिहाई कनेक्सन बक्सहरु जलाए। ९० प्रतिशत काठमाडौको टेलिफोन चलेन, कतै कति त ९ महिना सम्म चलेन।मानबीय क्षति त भए भए, अथाह भौतिक सम्पतिको नोक्सान् पनि ब्यहोरे। गिरिजा प्रसादलाई दोष लगाए, एमालेको सरकार आए, गिरिजालाई पाटा कसेर भाटा हिर्काउने सगौरब हुँकार गरे। एमालेको ९ महिने सरकारले न त दोषी को हो भनी खोजबिन गरे न गिरिजालाई कार्यबाही गरे। फगत सत्ता चढ्ने सिंढी बनाए। नेपालको इतिहासमा प्रायोजित र नियोजित दंगाको कालो पन्नाको पहिलो पाना यही हो जस्तो लाग्छ।
Posted by: rahulvai Labels: समसामयिक
बेबी किंगको कुरा सुनिएको थियो तर बेबी प्रधानमन्त्री चांही देखिहालियो।
गिरीजा प्रसाद कोइरालाको कुरा कति गर्नु भन्यो, नगरी नहुने। केही समय पहिले नेपाली कांग्रेस संबन्धित महीलाहरुको कार्यक्रममा नेपालमा छिट्टै महीला प्रधानमन्त्री हुनेछ भनेर भन्नु हुंदा के भनेको होला, त्यस्तो प्रम हुने सम्भावना भएको कुनै महीला उम्मेदवार हाललाई त कोही छैन जस्तो लागेको थियो। कुरो अहिले बुझियो जब उंहाले आफ्नै छोरी सुजाता कोइरालाई बिना बिभागीय मन्त्री बनाउनु भयो-त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्ने गरी। बेबी किंगको कुरा सुनिएको थियो तर बेबी प्रधानमन्त्री चांही देखिहालियो। त्यसै त पहिले पनि प्रमबाट हुने काम कार्बाही छोरी सुजाता बाट अती प्रभावित हुने गर्थ्यो, तर अहिले झनै प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हेर्ने गरी मन्त्री बनाई दिए पछी सुजाताको पावर र पहुंचको कुनै सीमा रहेन।
राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरी शासन हातमा लिंदा उनी पुरुषको भेषमा मोटारसाईकल चढेर भारत पुगेकी थिईन, जबकी अन्य नेताहरु कोही नजरबन्दमा थिए कोही यंही भूमीगत थिए। निष्ठा र आस्थाको राजनीती गर्नेलाई त्यसरी भाग्नु जरुरत थिएन, तर उनीले त् बाबुको पद र पावरको दुरुपयोग गरेर चरम भ्रष्टाचार गरेकी थिईन र राजाले सोही भ्रष्टाचार को आरोपमा थुन्न सक्ने भएकोले उनी चोरको खुट्टा काट भन्दा, चोरले थुत्त खुट्टा तान्ने शैलीमा भारत भागीन। माओबादीका मातृका यादवले गिरीजा बाबुको सामुन्ने नै मन्त्री परिषदको बैठकमा रक्तचन्दन तस्करको नाईके सुजाता भएको आरोप लगाएका थिए र गिरीजाले क्रुद्ध भएर मातृकालाई तपाईं बाहिर निस्कनुस भनेका थिए। माओबादीसंग संपर्क स्थापित गरेर उनीहरुलाई शान्तीपूर्ण अवतरण गर्न ज्यान दिएर लागेका के पी सिटौलाको एकतमासले राजीनामा माग्ने यी सुजातालाई शान्ती प्रकृया बिथोल्न दरवार ले राम्रै संग प्रयोग गरेको देखिन्छ।
सुजाता नै प्रम गिरीजाको शासन संचालनमा पहुंच भएकोले राजा-सेनाद्वारा सुजातालाई हातमा लिन सके राजासंस्था टिकिराख्न सकिने कुरो बुझ्यो। सुजाताको भ्रष्ट र बिकाउ चरित्र भएकोले सुजातालाई हातमा लिन पनि त्यती ठुलो कुरो भएन र सेनाले सुजाता संग राम्रै संग संबन्ध बिस्तार गर्‍यो। सेनाको कार्यक्रमहरुमा सुजाता बिशेष अतिथीको रुपमा निम्त्याईन थालिईन्। यहाँसम्मकी सेनालाई दिईने मानवाधिकारवाद सम्बन्धी तालिममा सुजाता प्रशिक्षक समेत बनिन।अचम्मको कुरो होइन त? सेनाको ठेक्कपट्टाहरु सुजाताको मान्छेहरुलाई पार्न थालियो। सेनाले सुजातालाई राम्रै संग गुलीयो चटायो। यता गिरिजा पनि, आफू जनताको शक्तीबाट स्थापित हुँ भन्ने कुरो बिर्सिएर सेनाको समर्थन रहेमात्र आफू सत्तामा टिकिरहन सकने निर्कर्ष निकालेर सेनासंग संबन्ध बनाउन लालायीत देखिए।
अहिले यी सेनाका पुतली मैया प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्न शक्तिशाली मन्त्री बनेकी छन र मन्त्री बनेको भोली पल्टै बिराटनगर गएर राजसंस्थाको वकालत गर्न थालिसकेकी छन। राजा गलत हुन सक्छ, राजसंस्था गलत हुन सक्दैन रे।
यो सरकार गठबन्धन कामचलाऊ सरकार हो र यो जनआन्दोलन II ले स्थापना गरेको सरकार हो। यो कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार होइन र यहाँ कसैले मनपरी गर्न पाउदैन। तर गिरीजालाई यो कुरा कसले बताउने। अन्य सबै पार्टीले सरकारमा पठाउने मन्त्री आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर चुन्दछन। तर नेपाली कांग्रेस मात्र यस्तो पार्टी हो, जसमा को को मन्त्री बन्दै छन भन्ने कुरो पार्टीका अन्य सदस्यहरुलाई रेडियो र टि भीको समाचारबाट मात्र थाहा हुन्छ। के नेपाली कांग्रेस दासहरुको पार्टी हो र यसका मालिक गिरिजा हुन?
अब कू भयो भने दरबारले सुजालाई प्रम बनाउने छ। सुजाता अहिले बेबी प्रम बन्नु त्यसैको संकेत हो।